स्थगनले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki भुक्तानीको deferment
स्थगनले के गर्छ?
के तपाईंले ऋणको लागि आवेदन गर्नुभयो? या तपाईंलाई पैसा चाहिन्छ र ऋणको लागी आवेदन गर्न आवश्यक छ? त्यसोभए तपाइँ यसलाई स्थापनामा फर्काउनु पर्छ। दरहरू सामान्यतया सानो रूपमा राखिएको रूपमा तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि, यो हुन सक्छ कि तपाइँ अब एक निश्चित कारणको लागि साधारण किस्तहरू तिर्न सक्षम हुनुहुन्न। त्यसपछि तपाईं बैंकमा ए भुक्तानीको deferment लागू हुन्छ। मात्रा को घटन अब भुक्तानी को एक राम्रो रूप हो, जो सामान्यतया ब्याज को अतिरिक्त बिना संभव छ। अधिकांश समय यो स्थगित भएको बेला, सेवाका लागि चलानी धेरै ठूलो छ र एकै पटकमा भुक्तानी बर्दाश्त गर्न सक्दैन। धेरै मानिसहरूको लागि यो एक बिल निपटने अन्तिम मौका हो। जो कोहीलाई स्थगित गर्न चाहानुहुन्छ तुरुन्तै अनुबंधिक साझेदारसँग सम्पर्क गर्नु पर्छ। यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं समय मा यो गर्छन। अधिकांश समय यो निम्न मार्गमा चल्छ। तपाइँ एक सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ वा तपाइँ भाडा भुक्तानको साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि ए रिमाइन्डर लिखित।
सधैं ध्यान दिनुहोस्
यो चेतावनी कुनै पनि अवस्थामा उपेक्षा गर्नु हुँदैन। चाँडो चाँडै चालु व्यक्ति संग सम्पर्कमा प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो मेल वा व्यक्तिगत रूपमा गर्न सकिन्छ। साथै इमेल ठेगाना सम्भव छ। यो सधैं महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं एक स्थानान्तरणका लागि आवेदन गर्न चाहानुहुन्छ यदि तपाईं ग्राहक नम्बरहरू वा अर्डर नम्बर निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं इनभ्वाइस व्यक्ति वा देनदारलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग यी संख्याहरू सधैँ हातमा हुनुपर्छ। अब यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं सम्भव छ ईमानदार हुनुहुन्छ र चाँडै व्यक्तिलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्। धेरै मानिसहरू साहसी छन् र अधिवेशनको लागि जान्छन्। किनभने यसको अर्थ भनेको पैसा पाउने मौका हो। यो पैसा यी व्यक्तिहरूले साथै अरू सबैद्वारा प्रयोग गरिन्छ। स्थगित एक राम्रो कुरा हो, तपाईसँग मात्र पैसा लिनु भएको व्यक्तिसँग कुरा गर्नु पर्छ। जसले पनि यो विचारमा लिन्छ, चाँडै एक उपयुक्त समाधान पाउनेछ र त्यहाँ चाँडै समस्या पर्दैन। धेरै व्यक्तिहरूको लागि एक घण्टा अब सम्भव छ। तपाइँले भुक्तानीलाई सीधा भुक्तानीको साथ निर्दिष्ट गर्नु पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले पुन: भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई दर निर्धारण गर्नु पर्छ।
पहिले, जसले अब हेर्दै र किन्डिङ भुक्तानीलाई अनुमोदन गर्दछ, बताउनेछ कि दर सही छ कि वा अझ चाँडै ऋणहरू तुरुन्तै सुचारु गर्न आवश्यक छ। त्यसोभए तपाईंसँग चाँडै एक निर्णय छ, चाहे यो काम गर्दछ र केहि पनि गलत हुनेछ। यस्तो कानूनी लेनदेनको चाँडै रिपोर्ट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। धेरै लामो पर्खने व्यक्तिले बढी तिर्नुपर्छ। किस्त किन्न चाँडो फिर्ता फिर्ता लिन धेरै तरिकाको लागि हो। सबै भन्दा माथि, यो केहि जेब मा छोडिएको पैसा छ। त्यसैले तपाईंले जान्नु हुन्छ कि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ। रन-अपमा, सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले दुवै पक्षहरू सन्तुष्ट हुन सक्छ र राम्रो मध्यस्थता पाउनेछ। एक घन्टा केहि खराब छैन।
तर यो खराब कुरा हुन सक्छ। त्यसैले तपाईलाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनु पर्छ। यी भुक्तानीहरू चाँडै नै गर्नु पर्छ। अरूलाई तिर्न सक्ने व्यक्तिले त्यसो गर्नु पर्छ। किनकी यो ऋण चाँडै कम गर्न को लागी एकमात्र तरिका हो र शान्ति संग सुत्न पनि।